Juuk Chiedza Tambo yeApple Tarisa: Ruvara uye Aluminium Kupedzisa | Ndinobva mac
Kana tikatarisa kuwanda kwetambo nemidziyo yatinayo yeApple Watch yedu, tinoziva kuti iwo musika mukuru uye mafemu mazhinji ari kubheja zvakanyanya pazvinhu zvavo zveApple zvigadzirwa. Nyaya yaJuuk mumwe muenzaniso wakajeka wekuti zvishongedzo zvinofanirwa kugadzirwa sei zveApple zvishandiso, uine un yakanakisa dhizaini, yemhando yekupedzisa uye mutengo maererano nechishongedzo yatinozoisa pane yedu kifaa.
Mune ino kesi, Juuk ane mune yayo chigadzirwa katalog yakateedzana inoshamisa mabhanhire eedu Apple Watch uye iyo Juuk Lightweight modhi Icho chimwe chazvo. Ino nguva isu tine patafura tambo yakagadzirwa nealuminium ine yakanakisa magumo uye ine rakanyatso musiyano uye runako ruvara. Iyo modhi ine akasiyana akasiyana aripo: muraraungu, zvinova izvo zvatinokuratidza mune ino chinyorwa, iyo cosmic grey, sirivheri, obsidian uye ruby, yeiyo 43 kana 44mm mamodheru.
Muchiitiko cheiyo 38 kana 40 mm Apple Watch, tinowana mutsauko pakati pemavara: iyo cosmic grey, muraraungu uye sirivheri izvo zvakafanana neiyo yakakura modhi uyezve isu tine iyo ruvara lavender uye chando. Aya ese mamodheru iwe unogona kuona pane yepamutemo Juuk webhusaiti.
Chinhu chakanakisa nezverudzi urwu rwe tambo ndechekuti inyowani zvishongedzo zvine dhizaini dhizaini iyo zvakare inopa yepamusoro mhando inopedza. Juuk haasati atanga chero mhando nyowani dze tambo kwenguva yakareba asi tIyo ine nhoroondo refu maererano nemhando iyi tambo yeApple Watch. Izvo zvigadzirwa zvekugadzira zvakanakisa pamwe nekupera kwayo, saka hatizove nematambudziko kana tasarudza kutenga rimwe remabhanhire aro.
Chinhu chisina kunaka mune iyi pfungwa ndechekuti chishandiso chakakosha hachiwedzerwe kuti chikwanise kugadzirisa tambo kune saizi yechiuno chedu, chimwe chinhu chinopihwa nevamwe vanogadzira tambo dzechita ichi. Iwo marinki anogona kuiswa kana kubviswa kuti aagadzirise kune edu saizi asi Hatina chishandiso chatinosiya pasi pemitsara iyi.
[YEMAHARA] Kubva kuna Juuk vanotiratidza chishandiso chavo chaunogona kushandisa kugadzirisa tambo uye izvo zviri nyore kushandisa:
Chero zvazvingaitika, mabhanhire akasiyana ayo Juuk anopa mune yayo chigadzirwa katarogu inogona kuve inonakidza kune avo vasingade mabhande eApple kana tambo dzakajairika dzatinowana mumusika. Juuk yakasarudzika kwazvo uye mune iyi pfungwa inopa sarudzo
Unogona kuwana yako Juuk Chiedza kubva kune iyo webhusaiti yekambani game mutengo pa $ 79 yeiyo 42 uye 44mm modhi uye $ 119 yeiyo 38 kana 40mm modhi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Juuk Chiedza Tambo yeApple Watch: yakajeka uye ine aluminium kupera